Ndiri mudzimai ane makore 39 nemwana mumwe chete uye ndinodawo murume . . . | Kwayedza
Ndiri mudzimai ane makore 39 nemwana mumwe chete uye ndinodawo murume . . .
04 Feb, 2016 - 23:02	 2016-02-04T23:10:04+00:00 2016-02-04T23:10:04+00:00 0 Views
NDINOTENDA ndakamuwana murume wandaida saka veduwe-e vamwe chiregai kuramba muchindifonera pa0779 534 154 nekuti mungandirambisa.
Ndiri murume ane makore 50. Ndinotsvagawo mukadzi wekuroora ane makore 30-38. Ngaave ari HIV negative, akadzidza, anoshanda uye asina kubvira amboroorwa kana kuita mwana. Ini ndiri HIV negative, ndinoshanda zvakare ndine dzidzo yepamusoro-soro. Ndibatei pa0714 353 640.
Ndakambonyorera kuchirongwa chino nguva yapfura ndikawana vaitamba nematstotsi. Ini ndiri mukomana ane makore 28 ndiri HIV+ asi handiratidzike. Ndinoda musikana ane makore 22 zvichikwira. Ngaave anotya Mwari akatendeka ane rudo chairwo uye ava kuda zvemba. Ndapota ndinodawo anoshanda chete achigara muHarare. Andifarira anondibata pa0772 761 114.
Makadii henyu? Ndiri mukomana ane makore 24 ndinogara kuEpworth uye ndinotsvagawo musikana ane makore 20 zvichidzka asina chirwere, ane rudo anonamata. Nhare yangu 0779 916 515.
Ndiri mudzimai ane makore 39 nemwana mumwe chete uye ndinodawo murume ane makore 40 – 50 anoda zvemba. Anoda ngaandibate pa0776 452 132.
Ndiri mukadzi ane makore 33 ndinodawo murume anoonekera anoshanda uye anonamata ane makore 33-48. Anoda zvemba ngaandibate pa0779 986 509.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 35 nevana 2 ndinotsvagawo mukadzi ane makore 20 kusvika 28 anoda zvemba uye akazvipira kunoongororwa ropa. Ini ndinoita zvekutengesa, ndiri muHarare. Anoda ndibate pa0717 676 200.
Makadini veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 33 ndinotsvagawo murume ave kuda zvekuroora anoshanda. Ndinobatika pa0776 991 621.
Ndinodawo mukadzi ane makore 31 ari pachokwadi, ndine mwana 1 saka ndinodawo ane mwana mumwe. Anoda ngaandibate pa0772 233 783.
Ndiri mukomana ane makore 26 ndinotsvagawo musikana ane makore 18 kusvika 24. Ndinobatika pa0775 618 039.
Ndiri murume ane makore 40 nevana vaviri, HIV positive uye ndiri kutsvagawo mukadzi ari HIV positive wekuroorana naye ane zvinhu zvake. Fonai pa0774 030 729.
Ndiri murume ane makore 40 nevana 3, HIV negative uye ndiri murimi. Ndinodawo mudzimai ane makore 25-38 nevana 3 zvichidzika. Ane rudo achinamata ngaandibate pa0771 617 647.
Ndiri mukadzi ane makore 20 nemwana 1, ndinotsvakawo murume ane makore 40 ari pachokwadi uye ari HIV negative. Ndibatei pa0777 800 603.
Ndiri kutsvaga murume ane makore 40 ari HIV positive asingaratidzike kuti anorwara ane vana. Anoda nezvangu ngaandibate pa0738 260 504.
Ndiri murume ane makore 33 ndinotsvagawo mudzimai ane makore 18 kusvika 21 asinawo mwana ari negative seni. Asi vakadzi vane varume mudzimba ndapota hangu kwete gutsikanai naidzodzo dzimba dzamakapiwa naMwari. Nhare yangu 0778 252 933.
Ndiri mukomana ane makore 23 ndotsvagawo musikana ane makore 18 – 21 akanaka uye anonamata. Ndinobatika pa0718 532 161.
Ndiri jaya rine makore 21 okuberekwa ndinotsvagawo mhandara iri pachokwadi uye ine rudo.
Ndinogara maRusape, anondida anondibata pa0784 230 924.
Ndiri murume ane makore 42 ndodawo mukadzi ane makore 34 – 40 kana ane vana vaviri. Ndiri kurarama ndiri pamushonga asi handiratidziki kurwara. Ndibatei pa0718 366 500.
Makadii? Ndiri murume ane makore 40 ndinodawo mukadzi ane makore 35 – 40 asiri pamushonga uye akashambidzikawo. Nhare yangu 0712 584 137.
Ini ndiri mudzimai ane makore 37, HIV positive uye ndiri kutsvagawo murume ari pachokwadi.
Ndine vana 2, nhare yangu 0713 745 536.
Makadini? Ini ndiri mukadzi ane makore 37 nevana 2 ndinoda murume anondidawo anoda zvemusha kwete zvekutamba. Asingarware ndibate pa0717 257 185.
Ndiri murume ane makore 29 ndinoshanda muHurumende, ndinodawo mukadzi anoshanda ane makore 18 – 22 anove mutema akanaka. Ngaave ane mwana mumwe, nhare yangu 0718 260 444.
Makadini veTishamwaridzane? Ndiri mukadzi ane makore 28 ndinotsvagawo murume ane makore 29 kusvika 34 ane mwana mumwe kana vaviri uye anoshanda. Anotarisika akazvipira kuongororwa ropa anondida ngaafone pa0778 545 646.
Ndiri musikana ane makore 19 ndinotsvagawo mukomana ane makore 20 anondidawo asina chirwere. Ndinobatika pa0775 557 342.
Ndiri mudzimai ane makore 32 nevana 2 ndinotsvagawo murume ane makore 35 kusvika 38 anoziva Mwari. Ndapota matsotsi tambira kure pamwe nevane madzimai avo. Ndiri HIV negative, nhare yangu 0784 219 212 chero nguva.
Ndiri mukadzi ane makore makumi mana namatatu, handina mwana kana kumbobvira ndaita murume. Anondida ngaandibate pa0777 678 914.
Makadii? Ndiri murume ane makore 34 nemwana mumwe. Ndinotsvagawo mudzimai wekuroora ane makore 33 zvichidzika ane mwana kana asina uye chero asingashandi. Ari pachokwadi ngaafone kana kutumira sms pa0774 862 417.
Makadii henyu? Ndiri murume ane makore 38 ndinotsvaga mukadzi ari kuda zvemba ane mwana mumwe anoda zvekugara kumusha.
Ndapota vasiri pachokwadi kwete. Nhare yangu 0737 445 672.
Ndiri mukomana ane makore 30 ndinodawo musikana wekuroora ane makore 18 kusvika 28 anogezawo uye anofarira kuenda kuchechi asina husimbe. Nhare yangu 0776 001 703.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 34 ndinotsvakawo mukadzi anoda zvemba anotya Mwari ane makore 35 zvidzika akanaka uye ane mwana 1. Anoda ndibate pa0773 342 766.
Ndiri mudzimai ane makore 26 nemwana mumwe ndinotsvagawo murume ane makore 30 kusvika 38 ane vana 2 kana 3. Ari pachokwadi ari HIV posetive seni ngaandibate pa0778 258 493.
Ndiri mukadzi ane makore 33 ndodawo murume ane makore 35 – 40 akavimbika asina mukadzi. Anotya Mwari, anoda ngaafone pa0774 079 605.
Makadii veKwayedza? Ini ndiri mukomana ane makore makumi maviri nemashanu, ndinotsvagawo musikana akavimbika wekuroora ari pachokwadi. Ndinobatika pa0773 868 114.
Ndakambonyorera kuchirongwa chino ndichitsvaga mudzimai uye ndakamuwana saka nekudaro vamwe chiregai kufona pa0774 100 369.
Makadii zvenyu veKwayedza? Ndiri mudzimai ane makore 45 nevana vaviri uye ndiri kutsvagawo murume ari pachokwadi wekudanana naye. Ndiri kurarama ndisina utachiona hweHIV, andifarira nhare yangu 0772 935 243.
Makadii veKwayedza? Ndiri mudzimai ane makore 32 ndinotsvagawo murume ari pachokwadi chekuroora ane makore 33 zvichikwira. Ndine vana 2, ari pachokwadi ngaandibate pa0783 885 297.
Ini ndiri mudzimai ane makore 50, HIV positive asi handioneki kuti ndinorwara uye ndinoita basa remawoko. Ndinoda murume ane makore 50 kusvika 65 ari positive asi asingaratidzike kuti ane utachiona. Nhare yangu 0717 213 314.
Ndiri murume ane makore 32 nevana vaviri uye ndinotsvagawo mukadzi ane makore 22 kusvika 28 anoda Mwari asi vanotamba kwete. Ndibatei pa0774 928 693.
Ndiri mukomana ane makore 23 ari kutsvaga musikana wekuroora ane makore 18-21.
Ari pachokwadi ngaandibate pa0782 825 579.
Makadii henyu veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 22 uye ndinotsvakawo musikana ane makore 18 kusvika 19. Ndinoshanda, andifarira ngaandibate pa0777 952 684.
Ndiri murume ane makore 43 nevana vatatu, ndinotsvagawo mudzimai wekuroora akavimbika anotya Mwari. Akagadzirira kuongororwa ropa ngaandibate pa0779 659 228.